Ikhaya leholide le-Atmospheric 'Voor Anker' e-Katwijk - I-Airbnb
Ikhaya leholide le-Atmospheric 'Voor Anker' e-Katwijk
Katwijk aan Zee, Zuid-Holland, i-Netherlands
Indlu encane ibungazwe ngu-Gerdina
U-Gerdina Ungumbungazi ovelele
Sinikeza ikhaya leholide elithokomele nelikhangayo elihlonyiswe ngokugcwele. Kulungiswe ngokuphelele futhi kufakwe isitayela esihle. Unesango lakho lokungena, indawo/ingadi ethokomele, kanye neshede lokugcina impahla yakho. ukubeka amabhayisikili. Emamitha angu-800 ukusuka ogwini futhi eduze nezindunduma, indawo enhle yokuhlala. Ngaphezu kwalokho, ikhaya lethu leholide liyindawo ekahle yokuthatha uhambo ukusuka lapho ukuya, ngokwesibonelo, e-Keukenhof.
I-Leiden, i-Delft, i-Hague ne-Amsterdam nayo ingafinyelelwa kungakapheli isigamu sehora ngemoto.
Ikhaya lethu lamaholide elilungiswe ngokuphelele, eliwubukhazikhazi linomnyango wangasese nendawo eningi ezungeze indlu yokuhlala ngaphandle. Ungakwazi ukupaka mahhala emgwaqeni ongemuva kwendlu. Senza konke okusemandleni ethu ukukunikeza umuzwa weholide omnandi. Umbhede owendluliwe namathawula okusetshenziswa kuyingxenye yenkonzo yethu.
I-Katwijk iyidolobhana eliyingqayizivele ngenxa yendawo ekuso ogwini nezindunduma. Ngaphezu kwalokho, idolobhana lethu linesikhungo esihle esinezitolo ezinhle kanye nezindawo zokudlela ezanele uma ungakuthandi ukupheka. Noma uthole inhlanzi enhle ezungeze i-boulevard. I-swimming pool kanye nemakethe yamasonto onke kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho siyatholakala ukuze uthole imibuzo noma izimo eziphuthumayo.
UGerdina Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Katwijk aan Zee namaphethelo